01 / 08 / 2019 ရော့ Paton 1178 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၆၆ Lunar Lander, 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, Dino-Mech တိုက်ပွဲ vs 75938 T-rex, Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း, Lego, Lego ဖော်မြူလာ 1, Lego Jurassic World, Lego မဂ္ဂဇင်း
Apollo ၁၁ မွန်းဆင်းသက်ပြီးအနှစ် ၅၀၊ 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, Jurassic World နှင့်ဖော်မြူလာ 1 ဆောင်ပုဒ်ပြIssueနာ 8 Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်းသည်ယနေ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိစတိုးဆိုင်များသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်
အ္ဌမထုတ်ဝေ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ အားလုံးသင်၏လောကတည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်း Lego ယနေ့မှစ၍ UK တစ်လွှားရှိ WHSmith စတိုးဆိုင်များတွင်ရနိုင်သည်။
မှာရောင်းမှာ www.brickfanatics.com/magazine ဇူလိုင်လအစောပိုင်း မှစ၍ စာရင်းပေးသွင်းသူများနှင့်အတူရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်၊ ပြIssueနာ ၈ သည်အများပြည်သူအားရောင်းချလျက်ရှိပြီး၊ အလားအခြေခံအကြောင်းအရာများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသော Lunar module နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဆတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
နှစ်ခုလုံး နာဆာ နှင့် အ Lego Group က ကျနော်တို့မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မသာစူးစမ်းအဖြစ်ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါ ၁၀၂၆၆ Lunar Lander Lego set, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတာကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၅၀ ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တကယ့်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ညီမျှတယ်။
Jurassic World ထို့အပြင်၏ဤနောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေအတွက်စူးစမ်းဖြစ်ပါတယ် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်းဒီဇိုင်းမန်နေဂျာမားကော့စ်ဘေ့စ် (Markos Bessa) မှကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရှာဖွေမည်ကိုသိရှိနိုင်သည် Lego အုပ်စုသည်ဒိုင်နိုဆောများနှင့်ပြည့်နေသောဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံကိုချဲ့ထွင်ပြီး၊ Dino-Mech တိုက်ပွဲ vs 75938 T. rex.
Creator Expert ဒီဇိုင်းမန်နေဂျာအထူးကျွမ်းကျင်သူဂျေမီဘာရာ သီးသန့်အ previews 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, ဆိုင်ကယ်၏လှပပြီးသီးသန့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ။
အဆိုပါ ဘယ္လို နှင့်အတူထုပ်ပိုးအပိုင်း Lego အကြံဥာဏ်များ, လှည့်ကွက်များနှင့်နည်းစနစ်များ, McLaren ၏ livery ထွက်အလှဆင် 2019 ဖော်မြူလာ 1 ကားကြီးစွာသော minifigure - စကေးတည်ဆောက်မှုနှင့်အတူ ဦး ဆောင်။
ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် www.brickfanatics.com/magazine နှင့်ပြီးသားစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ, ပြIssueနာ 8 နှင့်အတူ Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ယခု UK ကိုဖြတ်ပြီး WHSmith စတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချနေသည်
ပြ8နာ ၈ ကဒုတိယပြissueနာဖြစ်တယ် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း တစ် ဦး ပြောင်းရွှေ့ကတည်းကဖြန့်ချိ ပိုကြီးတဲ့ပုံနှိပ်ပုံစံ high definition gloss front cover နှင့်အတူ။
ဤမဂ္ဂဇင်းကိုလစဉ်လတိုင်းသင့်ထံသို့ယူဆောင်လာသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပါ Lego၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာများကိုအခြေခံသည် 12- ပြissueနာ or 24- ပြissueနာ စာရင်းသွင်းခြင်း မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်စီကိုအမြန်ဆုံးနှင့်ပထမရရှိခြင်းအပြင်၊ အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်ခများ၊ အခမဲ့ထုတ်ပေးမှုများနှင့်အထူးသီးသန့်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးခံစားခွင့်များအနေဖြင့်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသည်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသူအာမခံချက်.
- ပြဿနာ 8 of Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ယခုရရှိနိုင်
- အကြောင်းအရာ ၁၀ ခု ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စာရင်းသွင်း Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း
← Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်5လမ်းကိုမျှော်လင့်art လာမည့်နှစ်တွင်ရိုက်ကူး
LEGO 71025 စုဆောင်းထားသောအသေးစားစီးရီး ၁၉ ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် →